Waxaa wali socda wada hadaladii udhaxeeyay siyaasiyiinta ama saamilayda siyaasada dalka.
saacadihii ugu danbeeyay waxaa markale qadka taleefoonka kuwada hadlay madaxda dawlad goboleedyada dalka, waxay isla garteen sida aan xogta ku helayno in dalka aan laga qaban karin wax doorasho ah inta laga xalinayo qodobada la isku hayo, taasoo aysan jeclaysan madaxda Dawlada Federalka.
Wadahadalada waxaa gar wadeen ka ahaa madaxweynaha K/galbeed Cabdi casiis Lafta Gareen, waxaana la isla qaatay in dabayaaqada bishan kulan la isugu yimaado si loo dhameeyo is fahmi waaga taagan.
warar laga helay madaxda maamulada ayaa sheegaya in kulanka halka lagu qabanayo aan wali la isku raacin.
Dawlada federaalka waxay rabtaa in kulanku ka dhaco Muqdisho, Lafta Gareen wuxuu rabaa in kulanka lageeyo Baydhabo maadaama uu isagu oday kayahay wadahadalada hada socda, Saciid dani iyo Axmed madoobe waxay doonayaan in Garoowe la isku arko, Axmed Qoor qoor wuxuu ku talinayaa in Dhuusamareeb lagu dhamaystiro wadaadalada doorashada maadaama ay iyada ka soo bilawdeen,
Halka musharixiinta Xilka Madaxweynaha iyo Beesha Caalamku ay raali ka noqon doonaan meelkasta uu shirku ka dhaco hadii is af- garad la gaarayo.
Hadaba Waxaa cad in la isku fahmay in laqabto kulan looga wada hadli doono masiirka doorashada dalka, Taasoo abuuri karta xasilooni siyaasadeed, waxaana muuqda in dhinacyada oo dhan ay garteen in cid kaliya aanay ku takri fali karin wax umadda oo dhan ka dhaxeeya.
Si kasta oo ay tahay shirka doorashada looga hadli doono ayay ubadan tahay inuu ka dhaco Muqdisho ama Baydhabo, Beesha Caalamkuna waxay fududeyn doontaa dhaqaalaha kulankaas ku bixi doona.
Ugu danbeyn waxaa muuqata in habka iminka wax usocdaan ay tahay sida uu ku taliyey musharax R-wasaarihii hore Xasan Ali Khayre, isagoo xusay in hadii dalka laga qabto doorasho aan la isku raac saneyn inay dhalan doonto Dawlad aan la isla ogolayn, taasoo iyana keeni karta xasilooni daro siyaasadeed iyo bur bur ku yimaada hay’adeheena dawliga ah.
Is fahamkan cusub ee ah in laga wada hadlo waxa la isla leeyahay waxay keeni kartaa in laga heshiiyo oo la iskaga tanaasulo waxyaabaha la isku hayo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay inay waddo diyaargarow dhanka amniga doorashada wallow heshiis lagu ahayn..
Next articleDil ka dhacay Suuqa weyn ee Bukaaraha
Waxay ila tahay in ay muhiim tahay in Ra'iisalwasaare Mohamed Hussein Roble uu shan arrimood ogaado kahor inta uusan tagin shirka 20ka May. 1- In...